I-Zirconia Cyan Six-Petals Flower Pendant (14K) - Popular Jewelry
I-Zirconia Cyan Six-Petals Flower Pendant (14K)
Insimbi eyigugu: 14 Karat Yellow Gold
Amatshe angathuthukiswa uma uceliwe
Ukuphakama: 34.3 mm *
Ububanzi: 24.0 mm *
Isisindo: 4.1 amagremu *
* Zonke izinsimbi nezilinganiso zilinganiselwa.
Njengoba kunikezwe ukuthi zonke izinsimbi zobucwebecwebe zithambile futhi ziyathamba, kulandela ukuthi ubucwebe begolide nobesiliva kufanele bufakwe futhi buphathwe ngokucophelela okukhulu. Lokhu kunjalo ikakhulukazi ngezingcezu zobucwebe obucwebezelayo, obulula, obusengozini enkulu yokulwa kunabalingani babo abasindayo. Ubucwebe obuhle kufanele bususwe emzimbeni ngaphambi kokwenza umsebenzi onzima (njengomsebenzi wokwakha noma ezemidlalo yokuxhumana) njengoba zingabambelela ezintweni zakwamanye amazwe futhi zidabuke. Izindatshana ezinhle zobucwebe kufanele futhi zisuswe ngaphambi kokugeza njengoba amakhemikhali anokhahlo ngaphakathi kwama-shampoos kanye nokuwasha kungangcolisa noma konakalise ubucwebe.
Kunconywa kakhulu ukuthi ubucwebe besiliva, uma bungasetshenziswa, bugcinwe ngaphakathi kwesikhwama esingangeni moya noma esitsheni. Lokhu kuvikela isiliva ekuphendukeni ngamakhemikhali nezinto ezithinta imvelo (njengomoya ocebile nge-oxygen; isikhumba esine-asidi) obekungadala ukuthi isiliva lingcole futhi lilahlekelwe yinkazimulo yalo yemvelo, emhlophe okweparele.
Izicucu zesilivere ezihlanjululwe sezivele zivuthisiwe zingabuyiselwa esimweni sazo sokuqala ngokushesha ngezixazululo zokuhlanza amakhemikhali, njenge enye esiyinikezayo. Ukugeza okusheshayo okungamashumi amabili nesibili ku-cleaner kuzosusa izingqimba zethoni nokusila esiliva.
Ezinye izixazululo zasekhaya zokususa i-tarnish buildup nazo ziyatholakala, yize kungenjalo kalula. Izingcezu zesiliva ezintekenteke zingafakwa kwikhambi lamanzi le-baking soda ne-aluminium foil futhi zilethwe ngamathumba; ubucwebe kufanele bukhuphuke ngombala emizuzwini embalwa.
Ubucwebe begolide bungagqokwa ngenkathi ugeza inqobo nje uma ungasebenzisi noma yiluphi uhlobo lwamakhemikhali anokhahlo ekugezeni kwakho. Gwema ukusebenzisa ubucwebe begolide echibini ngoba i-chlorine ingalimaza i-alloy yegolide.